Iiplani zokuFunda zeBhayibhile eziPhambili zokuPhucula ixesha lakho lokuCima
IziCwangciso zoNyaka zeeNcwadi zokuFunda zeBhayibhile
Ubalulekileyo ebalulekileyo ebomini bobuKristu kuchitha ixesha lokufunda iLizwi likaThixo. Mhlawumbi awuyazi ukuba uza kuqaliswa okanye njani ukuba uhambe malunga nalo msebenzi obonakala unzima. Okanye mhlawumbi unamava okufunda iBhayibhile, kodwa ufuna indlela entsha. Nanku ukujonga kwezinye iiplani zokufunda zeBhayibhile zokuphucula ixesha lakho lokuthula noThixo.
Isicwangciso soPhulo lweSifundo soBuhlu lweBhayibhile
Isicwangciso sokuFunda seBhayibhile sokuNqoba. Mary Fairchild
Esinye sezicwangciso ezifundwayo zokufunda iBhayibhile yiSicwangciso soPhulo lweSifundo seNtshontsho , esiqulunqwe nguJames McKeever, Ph.D., kwaye sipapashwe ngu-Omega Publications. Unyaka ndaqala ukulandela ilungiselelo elilula, iBhayi- bhile ngokuqinisekileyo yaphila ebomini bam. Kaninzi "
Iinyawo ngeBhayibhile yi-52 yeveki yeCronological Reading Plan ngoRichard M. Gagnon. Esi sikhokelo sichaza indlela yokufunda ngekhophi yakho eyaziwayo yeLizwi likaThixo ngendlela echanekileyo yokulandelana. Ukufunda izabelo, amanqaku, iifoto kunye nexesha lokugqibela zizinye zezinto zalo.
IBhayibhile ngoNyaka - IsiCwangciso soFundo lweSuku se-365
Le Bha yibhile kwisiCwangciso seNcwadi seSuku seNcwadi seBhayibhile isenziwa kwi-Intanethi kwi-Biblica. Bhala le khasi kunye nomhla ngamnye uya kufumana ukufundwa kwakho kwansuku zonke. Isicwangciso sibonisa ukukhethwa komsindo kulabo abakhetha ukuphulaphula i-intanethi. Kaninzi "
ISV Izifundo Zokufunda zeBhayibhile
Umshicileli we- English Standard Version yeBhayi- bhile unikeza izicwangciso ezininzi zokufunda ngeBhayibhile kwiifom ezahlukeneyo (ukuprinta, i-web, i-imeyile, iselula, njl. Izicwangciso zingasetyenziswa nayiphi na iBhayibhile. Kaninzi "
ILizwi likaThixo kuzo zonke iintlanga
ILizwi likaThixo kuzo zonke iintlanga licebo lokufunda leBhayibhile nguJ. Delbert Erb, umthunywa wevangeli ohlala emsebenzini. Ukwazi ukuba akulula ukufunda kwiBhayibhile yonke, wadala isikhokelo esahlula iZwi likaThixo kwi-365 yokufunda imihla ngemihla. Udibanisa izibhalo ezifanayo kunye neemeko zembali, ukuxhasa nganye ukufunda kunye nomthandazo okhuthazayo nesaga.
Usuku ngeBhayibhile Yosuku
Ngaba ufuna isicwangciso seBhayibhile sokufunda kunye nabantwana bakho? Usuku ngeBhayibhile Yosuku ngoKaren Williamson noJane Heyes lenzelwe ngokukhethekileyo ukukhundulwa nabantwana. Inombhalo olula ukufundela kunye nombala, imifanekiso enobomi. Inye nganye yeentsuku ezingama-365 ibandakanya ibali ebonakalisa injongo neenjongo zikaThixo. Ikhuthaza ukubandakanyeka komntwana ngemibuzo elula ephathelele ibali kumava omhla ngemihla. Kwakhona imithandazo elula ukuthandaza nomntwana wakho. Kaninzi "
Isiqalo esisiNgisi IsiNgesi Ukuxelela ixesha
Uyazi Ukwazi njani i-Pony
I-First Lady Apartment House yase Dakota-NYC